Nkwuputa Port Moresby na Mpaghara Mpaghara Nchedo na Nchebe nkwado
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ ọhụrụ Papua New Guinea » Nkwuputa Port Moresby na Mpaghara Mpaghara Nchedo na Nchebe nkwado
Airlines • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ ọhụrụ Papua New Guinea • Tourism • Transportation • Akụkọ dị iche iche
Mpaghara Pacific na -eche ihe ịma aka ihu na idobe nchekwa, nchekwa, ntụkwasị obi, ntụkwasị obi, rụọ ọrụ nke ọma, na -adigide gburugburu ebe obibi, yana sistemụ ụgbọ elu nwere ike ịba uru. Ndị a gụnyere nrube isi n'ụkpụrụ International Civil Aviation Organisation (ICAO) na Nkwekọrịta maka Ọdụ Ụgbọelu Mba Nile, ịbawanye njikọta ụgbọ elu Pacific na mba ụwa, usoro nkwado ego, yana ịtụle nnukwu mmetụta nke COVID-19 na ụgbọ elu na mmekọrịta ọha na Pacific. mgbake akụ na ụba.
Ndị minista na -ahụ maka ụgbọ elu obodo na ndị isi ụgbọ elu sitere na steeti 14 Pacific Islands zukọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'izu a iji kwado ụgbọ elu Nkwupụta Port Moresby na -emezu nkwa ha kwere na ha ga -aga n'ihu n'okwu ụgbọ elu mpaghara Pacific dị mkpa site na usoro mmekorita ọhụrụ kwalitere.
Nzukọ ọgbakọ ndị na -ahụ maka ụgbọ elu mpaghara (RAMM), nke gọọmentị Papua New Guinea kwadoro na Wenezdee, 30 June, mere ka ndị otu mba Pacific Forum kwadoro Nkwupụta Port Moresby na nchekwa na nchekwa ụgbọ elu.
The Nkwupụta Port Moresby na-enye ọtụtụ ụzọ dị mkpa na omume iji zaghachi ihe ịma aka ndị dị oke mkpa gbasara nchekwa ụgbọ elu yana arụmọrụ nchekwa na-eche ndị otu ọgbakọ ihu, bụ ndị ọrịa COVID-19 metụtara.
Nzukọ ndị ozi bụ nke izizi ụdị ụgbọ elu mpaghara dị elu dị otu a kemgbe mmalite nke ụgbọ elu Nkwekọrịta nchekwa na nchekwa ụgbọ elu Pacific (PICASST) n'afọ 2004.
Australia, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Kiribati, Nauru, New Caledonia, New Zealand, Niue, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tuvalu, na Vanuatu gara RAMM.
Mba ndị otu ọgbakọ nabatara isonye na Isi ụlọ ọgbakọ ọgbakọ agwaetiti Pacific (PIFS) Secretary General, onye Civiltù Na-ahụ Maka Ọdụ ụgbọelu Mba Nile (ICAO) Onye odeakwụkwọ ukwu, na ndị isi sitere na ụlọ ọrụ CROP gụnyere Organizationtù Njem Nleta South Pacific (SPTO), Mmemme Mmepe Pacific Islands (PIDP), na Obodo South Pacific (SPC). Ndị nnọchi anya gọọmentị sonyere na United States of america na Singapore, yana ndị ọrụ si Bank World, Na Ụgbọ elu nke South Pacific Association.
Onye isi oche RAMM na minista na -ahụ maka ụgbọ elu Papua New Guinea, Honorable Sekie Agisa kwuru:
"The Nkwupụta Port Moresby bụ nnukwu ihe nweta nke na -ewulite na nkwa ndị gara aga ma na -enye nlebara anya ọhụrụ na mmejuputa ụzọ zuru oke na imekọ ihe ọnụ iji nweta nchekwa na nchekwa ụgbọ elu na -adigide. "
"Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ihe ịma aka, ozi a doro anya, site na imekọ ihe ọnụ na nkwa, mpaghara anyị nwere ike nweta nchekwa nchekwa ụgbọ elu na ntinye nchekwa siri ike,"
Nkwupụta ahụ na -egosi nkwa gọọmentị ndị Pacific na ịmepụta ụzọ n'ihu maka nchekwa na nchekwa ụgbọ elu siri ike. A ghọtara ụgbọ elu nchekwa na nchekwa dị ka ihe dị mkpa iji mee ka njikọta na mmepe na -adigide na Pacific.
Onye odeakwụkwọ ukwu nke PIFS, Maazị Henry Puna kwuru:
“Ọ dị anyị mkpa ịgbanwe echiche anyị na ụzọ anyị si 'azụmaahịa dị ka ọ dị na mbụ' wee malite inyocha ụzọ ọhụrụ na ụzọ ọhụrụ iji mepụta mpaghara ụgbọ elu dị nchebe, nke dị nchebe ma na -adigide maka mpaghara anyị; na nke na -akwalite mmụọ nke Blue Pacific ma na -akwanyere ikike ọchịchị obodo na ebumnuche mmepe anya. "
Onye isi odeakwụkwọ ICAO Dọkịnta Fang Liu kwuru, "Ibe ụgbọ elu na steeti Pacific dị oke mkpa iji hụ na nrube isi nke ICAO nke ga -emecha weghachite uru ụgbọ elu mpaghara a." Nkwupụta Port Moresby ga -ekwusi ike nke ọma mkpa ụgbọ njem ụgbọ elu na mgbake mba na mpaghara na steeti Pacific. "
Emere nnukwu ihe ịrịba ama ọzọ site na nkwado nke Okpokoro maka ụgbọ elu na Pacific nke ga-akwalite mmekorita mpaghara site na mmepe nke afọ iri Atụmatụ ụgbọ elu mpaghara Pacific.
Atụmatụ a ga -emepụta ụzọ maka nchekwa ogologo oge na -adigide nke usoro ụgbọ elu iji nye ọhụụ maka usoro ụgbọ elu Pacific nke jikọrọ ọnụ, nke jikọrọ aka na -akwado ụgbọ elu nchekwa, nchekwa, na -adigide na steeti Pacific niile.
The Atụmatụ ụgbọ elu mpaghara Pacific ga-elekwasị anya na mgbake COVID-19 na nkwalite ogologo oge nke sistemụ ụgbọ elu Pacific gụnyere ike ikike nleba anya nke ndị otu otu, ike, na ịdị irè.
E kwekọrịtakwara na a ga -emezigharị PICASST iji lebara mkpa mpaghara ugbu a anya nke ọma ka o nwee ike nwekwuo ohere imekọ ihe ọnụ, na iji ohere mee ihe gụnyere olu Pacific siri ike na sistemụ ụgbọ elu mba ụwa.
Ndị ozi kwenyekwara n'ịkwalite ọgbakọ ụgbọ elu mpaghara na-arụ ọtụtụ ọrụ iji lebara okwu na ohere ụgbọelu anya dị ka ihe kacha mkpa na mpaghara.
N'akụkụ a, ndị ozi ghọtara arụmọrụ ka mma nke nzukọ ụgbọ elu mpaghara, ọfịs nchekwa ụgbọ elu Pacific (PASO). Ha kwetara iji mee ka PASO sie ike site n'ịkwado ihe kwesịrị ekwesị na -adigide iji hụ na ọ na -aga n'ihu na -ebuga ọrụ nchekwa ụgbọ elu na ọrụ nchekwa na mba niile dị ka akụkụ dị mkpa nke nzaghachi ICAO. Pacific Small Island Mmụba Steeti Na -emepe emepe.
Ndị ozi kwetara na Cooks Islands na -akwado RAMM ọzọ na 2022, tupu ọgbakọ ICAO na -esote, iji nyochaa ọganihu wee tụlee PICASST emezigharị, Atụmatụ ụgbọ elu mpaghara Pacific, na nhazi nkwado ego na-adigide iji kwado mmekorita mpaghara etinyere na nzukọ ụgbọ elu mpaghara na-arụ ọrụ nke ọma.